Suuqa: Barca Oo Ka Go’an Saxiixa Haaland, Arsenal Oo Xiddig Lasoo Saxiixaneysa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay – Garsoore Sports
Suuqa: Barca Oo…
HADALHEYNTA MAANTA – BARCA KAMA HARIN HAALAND
Erling Haaland ayaa weli ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda Barcelona, sida laga soo xigtay Diario Sport.
Xiddiga kooxda Borussia Dortmund Haaland ayaa lala xiriirinayaa kooxaha Barca, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Bayern Munich, Juventus iyo Paris Saint-Germain.
Inkastoo Barcelona ay maskaxda ku heyso dhibaatooyin dhaqaale iyo suuq jaban, weli waxa ka go’an inay Haaland keento Camp Nou, inkastoo xiddiga Inter ee Lautaro Martinez iyo xiddiga Tottenham ee Harry Kane ay weli yihiin xulashooyinka suurtogalka ah.
Le10Sport ayaa sheegaysa in kooxda Arsenal ay si aad ah u xiiseyneyso inay Waqooyiga London keento da’yarka kooxda Rennes ee Eduardo Camavinga. Camavinga ayaa ah xiddig si weyn loo baadi goobayo iyadoo lala xiriirinayo kooxaha Madrid, United iyo PSG. Dhanka kale, Mundo Deportivo, ayaa warinaysa in Barca ay indhaha ku hayso laacibka reer France si ay ugu buuxiso booska Sergio Busquets.
AC Milan ayaa ku tala jirta inay heshiis rasmi ah ka saxiixato Fikayo Tomori oo ay kala soo wareegto Chelsea, sida uu warinayo Fabrizio Romano. Tomori ayaa wacdaro dhigaya tan iyo markii uu amaah ku yimid San Siro. Waxayse ku soo aadeysaa xilli Chelsea ay ka shaqeyneyso inay qandaraaska u kordhiso daafac Thiago Silva.
FT ayaa sheegeysa in xiddiga Bayern Kingsley Coman uu doonayo in loo laba jibbaaro mushaharkiisa si loo kordhiyo qandaraaska uu kooxda kula jiro. Ciyaaryahankan heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa horay loola xiriiriyay kooxda Manchester United.
Liverpool ayaa muujisay xiisaha ay u qabto weeraryahanka Leeds United ee Patrick Bamford, sida laga soo xigtay The Athletic.
Calciomercato ayaa warinaya in kooxda heysata horyaalka Serie A ee Inter iyo Lazio ay diirada saarayso weeraryahanka Chelsea ee Olivier Giroud, kaasoo qarka u saaran inuu ka tago garoonka Stamford Bridge iyadoo lala xiriirinayo Blues inay la xiriirto xiddiga Bayern ee Robert Lewandowski ama wakiilka xorta ah ee City Sergio Aguero.